Warbixin- Yaa u maqan Dadka iyo Dalka Abaartu wiiqday : – Xukuumada Puntland oo 20 booyadood oo qura uga qayb qaadatay Abaaraha, Masuuliyad xumo | puntlandi.com
Saturday, February 25th, 2017 | Posted by Pi
Warbixin- Yaa u maqan Dadka iyo Dalka Abaartu wiiqday : – Xukuumada Puntland oo 20 booyadood oo qura uga qayb qaadatay Abaaraha, Masuuliyad xumo
Abaaro aad xooggan ayaa ka jira gobolada Puntland, kuwaas oo ay u dhinteen dad iyo duunyo, waana abaaro aad u adag taaso u baahnayd in dawlad iyo dadweyne si wada jir ah ugu istaagaan.
Ganacsatada iyo dadweynaha reer Puntland ee ku nool gudaha iyo dibada door wannaagsan ayay qateen, kuwaas oo dhaqaalaha ay ku deeqeen gaarsiiyay Guddiga Gurmadka Abaaraha Puntland, oo noqday Guddiga kaliya uu buuxiyay kaalintii ay gabtay dawlada Puntland.
Dawlada Puntland oo Mas’uuliyad ay ka saaran tahay dalka iyo dadka ayaan haba yaraatee aan qaadan doorkeeda, waxaana Abaarta mudada dheer soo taagnayd ay uga qayb qaadatay Booyado biya ah oo kooban, waxaana dadweynuhu ay tabayeen in dawladoodu ay u damqanayso, ayna la qayb samanayso dhibataada, balse ma noqon sida ay reer Guuraga Puntland wax u arkayeen.
Safarkii Bari Iyo Karkaar ee Madaxweyne Gaas
Gurmadkii ugu waynaa ee dawlada Puntland ayaa ahaa midkii uu Madaxweynuhu safarka ugu aaday deegaano iyo degmooyin hoostaga gobolada Bari iyo Karkaar dhamaadkii bishii Janaayo, halkaas oo ay isugu tageen dadkii ugu badnaa ee u naq raacay, ka dib markii uu Roob ka da’ay halkaa.
Madaxweynaha Puntland oo aan u qorshayn dadka deeq haba yaraate, ayaaa dhulkuu booqanayay kula kulmay Raashin ay qaybinaysay Hay’ada TADAMUN oo ah Hay’ad wadani ah oo fadhigeedu uu yahay Puntland, balse ka hawl gasha Soomaaliya.
Wufuudii dawlada ayaa dhinac ka gashay raashin qaybinta, waxaana laga soo qaaday sawiro, ka dibna Madaxtooyada Puntland ayaa soo saartay Warsaxaafadeed ay ku sheegtay in Madaxweynuhu uu dadka reer Guuraaga ah gaarsiyay biyo iyo Raashin, balse Madaxtooyadu ka sheegin xaqiiqda raashinka iyo Hay’ada keentay ee qaybisay.
Hay’ada TADAMUN ayaa soo saartay Warsaxaafadeed ay kaga jawaabtay midkii Madaxtooyada kaso baxay bilowgii bishii labaad ayna ku sheegtay inay iyadu Raashinka ay qaybisay, ayna ahayd deeq ay dibada ka keentay.
Dadka reer Puntland xilligan waxay u dhimanayaan Abaaro, xoolihii waa dhamaaden, dadkii ku noola Miyiga waxay soo galeen Magaalooyinka, waxaana meesha kasi baxaya noloshii Miyiga oo ahayd Lafdhabar aysan sinaba uga maarmayn dadka Soomaaliyeed.
Dawlada Puntland iyada ayaa Mas’uuliyada qaaday, EEBE hortiisana ku dhaaratay inay dalka iyo dadka u shaqayn doonto, waxaa looga baahan yahay Mas’uuliyadda ay qaaday inay gudato, waxaa la marayaa xilli loo baahan yahay in shaqada dawladu ay haysto badankeeda loo jiheeyo sidii dadka iyo duunyada loo badnaadin lahaa.
Safaro dibada ah iyo Warsaxaafadeedyo si joogto ah loso saaro waxba maka badalayso xaalada taagan ee waxaa loo baahan yahay qorshe dhab ah oo dadka reer Puntland wax loogu qabanayo.
Xaalada Abaareed waa kasi daraysaa maalinba maalinta ka dambaysa, waxaana suuragal ah in xaaladu ay gaari karto meel aad u adag.
Siyaasiyiinta reer Puntland ayaa looga baahan yahay inay iyaguna ka qayb qaataan Gurmadka Abaarta, waayo dalka iyo dadka Mas’uuliyad ayaa ka saaran, xilligan oo lagu jiro xaalad adag looma baahna Mucaaradnimo ma dhalays ah iyo Ol’ole Doorasho oo aan waqtigiisa la gaarin,iyo sidoo kale hadalo aan macne siyaasadeed iyo wax tar midna laheyn oo aan wax masuuliyada iyo tudhaal ahi ka muuqan oo sidii dad qarwsan idaacadaha iyo banaanada laga yiraahdo.
Ugu dambayn reer Puntland uma dooran Mas’uuliyiinta Puntland Tamashle iyo dalxiis iyo Olole siyaasadeed oo madhaleys ah oo shuraako lagula yahay xubno federal ah oo uu shacbigu ku hungoobay mar hore.sidoo kale looma dooran dagaal joogta ah iyo wanjalaad uu maamulku kula jiro siyaasiyiinta iyo waxgaradka madaxbanaan ee reer Puntland ee tartanka ugu jira hanashada xilalka sar sare ee dawlada Federaalka, sidoo kale looma dooran inay furaha xafiiska wareejiyaan marka uu waqtigoodu dhamaado, ee waxaa loo doortay inay dalka iyo dadka ugu shaqeeyaan si daacadnimo ah, una gutaan sida uu farayo wajibaadka Dastuuriga ah ee ay ku dhaarteen.
Warsidaha Puntlandi wuxuu idiin soo gudbin doona xaalada adag ee Puntland ka taagan Wararkayaga xigga, hadduu EEBE idmo.